1.	#ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Chief Financial Officer, CFO) သည် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမှုဆောင် အရာရှိများအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပါဝင်ပြီး၊ လက်အောက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စာရင်းကိုင် အဖွဲ့တို့အပေါ်လည်း တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်ရသူ ဖြစ်သည်။
2.	ရှာရခက်ရင် အမြဲထမ်းဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ခန့်အပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အပြင်မှ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း (Part-Time CFO Services Outsource) မျိုးကို ရယူခြင်း လိုအပ်သလို စီမံနိုင်ကြပါတယ်။ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ အစရှိတဲ့ အာရှနိုင်ငံများနဲ့ အနောက်နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာတော့ (Part-Time CFO Services Outsource) ပုံစံမျိုးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ အမြဲထမ်းဝန်ထမ်းအနေဖြင့် (In-House) မှာ ခန့်အပ်ထားရင် စရိတ်စကတွေ တော်တော်တက်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ Management အနေနဲ့ လုပ်ငန်းအကျိုးအမြတ်ရဖို့၊ ရေရှည်မှာ (Growth) ရဖို့၊ ပြိုင်ဘက်တွေထက် သာလွန်ဖို့ အစရှိသည်တို့ကို အလေးထားလာကြပြီး မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ အက္ခရာကျတဲ့ အပိုင်း (Core Businesses) တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်လာလို့ပါပဲ။
3.	သူ (ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်) ၏ လုပ်ငန်း တာဝန် ဝတ္တရားများက ဘာတွေဖြစ်မလဲ….?
•	ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စာရင်းကိုင်အဖွဲ့တို့ အပေါ် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း၊ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားပေးခြင်း။
•	စီအီးအို (သို့) အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ နှင့် တကွ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များကို လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းဗျူဟာများ ရေးဆွဲပေးရခြင်း။
•	ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာများကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဘတ်ဂျတ်များကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင် စီမံခန့်ခွဲပေးရခြင်း။
•	ရေတို၊ ရေရှည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များအပေါ် အကြံဉာဏ်ပေးရခြင်း။
•	ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွင် ပါဝင်ကြသူများ၊ ပြင်ပမှ ပါတနာများကို ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအရာရှိတို့နှင့် ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပေါင်းကူးတံထား အဖြစ် ကြားခံစီမံခန့်ခွဲပေးရခြင်း။
•	ဘဏ္ဍာရေး၊ Operation, Marketing, Production, Manufacturing, HR နှင့် IT အစရှိသော ဌာန အသီးသီးတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို သုံးသပ်ပေးခြင်း။
•	ကုမ္ပဏီ၏ အခွန်အရပ်ရပ်အတွက် Plan ရေးဆွဲပေးရခြင်း။
•	ငွေသားစီးဆင်းမှု ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Cash Flow Management) အား စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းကျောင်းပေးရခြင်း။
စသည်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအတွင်း နယ်မြေများစွာ ((Various Area of Business) ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာ (Various Business Functions) များအတွက် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံပေးပြီး အကျိုးပြုကြရပါတယ်။
4.	ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်တစ်ဦးအား လုပ်ငန်းအတွင်း အမြဲထမ်းဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ခန့်အခြင်း (သို့မဟုတ်) အပြင်မှ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း (Part-Time CFO Services Outsource) မျိုးကို ရယူမယ်ဆိုင်ရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းများ ရှိမရှိကို အသေးအချာဆန်းစစ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
•	ရသုံးမှန်းခြေဆိုင်ရာ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုတွက်ချက်ခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း (Cash Flow Budgeting and Management)
•	ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ရန်ပုံငွေ အဆင်သင့်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း (Investment & Funding Readiness Preparation)
•	ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ လျော့ပါးအောင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို စီမံထိန်းညှိပေးခြင်း (Risk Mitigation & Internal Controls)
•	ရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီးနောက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း (post-investment Financial Management)
•	ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမတည်ငွေကြေး တိုးမြှင့်ရာတွင် ပံ့ပိုးပေးရခြင်း (Fundraising Services)
•	စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များကို တည်ဆောက်ပေးခြင်း (Implementation of Management Accounts)
•	စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များအား ချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူ ပေးခြင်း (Accounting System & SOP Support)
•	အောင်မြင် ထိရောက်သော ဗျူဟာများ ရေးဆွဲ ချမှတ်ပေးခြင်း နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနိုင်းဆောင်ရွက်မှု အကျိး ရလာဒ် ကိုသုံးသပ်ပေးခြင်း (Strategy & Synergies)
•	လုပ်ငန်းအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျမှုစရိတ်များ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့အား တွက်ချက် ပုံစံချပေးခြင်း (Business Analysis & Cost Structuring)
•	ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာလိုအပ်ချက်များ၊ အော်တိုစနစ်များကို စုစည်းအသုံးပြုနိုင်ရန် အကြံပေးခြင်း (Financial Technology, Automation, and Integration)
•	ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပေးခြင်း (Financial Decision-Making)
•	လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းများ၊ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းများအတွက် အကြံပေးခြင် (M&A Transactions and Valuation Advisory)
•	လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန် အတွက် အကြံပြုခြင်း (Corporate Development, eg JV, Acquisition, Investment Term Sheet)
5.	Bookkeeper, Controller & CFO Bundle အကုန်လုံးသော တာဝန်တွေအတွက် Full-Service ကို Outsource အပ်ရင် စရိတ်စကတွေ ဘယ်လိုရှိမလဲ…
•	တစ်လကို US$300 လောက်က စတင်ကာ လုပ်ငန်း Scope အပါ်မှာ မူတည်ပြီး US$10,000 လောက်အထိတော့ ရှိတက်ပါတယ်… တကယ်တော့ ဒီငွေကြေးပမာဏဟာ In-House Team အနေနဲ့ - Bookkeeper တွေ၊ Junior Accountant တွေ၊ Senior Accountant တွေ၊ Controller တွေ၊ CFO စသည်ဖြင့် လိုအပ်တဲ့ရာထူးအကုန်လုံးကိုအချိန်ပြည့်ခန့်ထားရတဲ့ စရိတ်တွေနဲ့ နိုင်းယှဉ်ရင် 40% ကနေ 50% လောက်အထိ သက်သာနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို ရနိုင်ပါတယ်….
6.	#မိမိကုမ္ပဏီအတွက်အမြဲလိုအပ်သလား၊ Project တစ်ခုအတွက် ကာလတစ်ခုအတိုင်းအတာထိပဲ အကူအညီလိုအပ်သလား ဘယ်လိုပဲ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) Outsource ရယူခြင်း တိုကို စဉ်းစားပြီး လုပ်ရမယ့် Work Scope၊ သုံးစွဲမည့် ငွေပမာဏ၊ လိုအပ်သော အချိန်အတိုင်းအတာ စသည်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြရန် စေတနာဖြင့် မျှဝယ်လိုက်ရပါတယ်…။